12 Akanaka Makamuri Ekutiza Munyika | Save A Train
musha > Travel Europe > 12 Akanaka Makamuri Ekutiza Munyika
Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba China, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Greece, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Nguva yekuverenga: 8 maminitsi
Zvinofadza, zvinotyisa, dyidzana, pasi pevhu nyika, kana dzimba dzekare, ari 12 makamuri ekupunyuka epasirese, hazvisi zvevasina kusimba moyo. Kwete, vakashinga chete, vane hunyanzvi vatambi vechikwata uye vadikani vepuzzle vachabudirira kuponesa nyika, uye kuburitsa zvakavanzika zvakakanganikwa kwenguva refu. Kana iwe uchifunga kuti wawana izvo zvinotora, wobva wanyora imwe yeiyi 12 makamuri ekupunyuka epasirese, uye edza kukunda zvipingamupinyi.
1. Sherlocked Kutiza Kamuri Amsterdam
Inotumidzwa zita remutikitivha ane mukurumbira pasi rose, Sherlocked yekutiza kamuri ndeimwe yemakamuri ekupunyuka anonakidza kwazvo munyika. Muna Sherlocked unogona kusarudza pakati 2 zviitiko zvakasiyana kwazvo; Iyo Yekuvaka kana iyo Vault. Imwe ndeye 60 maminetsi kureba, uye yechipiri ndeiyi 80 maminetsi kureba, zvese zvakanakira boka re 4 vanhu, vabereki nevachiri kuyaruka vanogamuchirwa.
zvisinei, mutsauko mukuru pakati pemakamuri maviri ekupunyuka chiitiko chechokwadi. Iyo Architect ichave iwe kuti ugadzirise zvakavanzika mune imwe nyowani kamuri yekuchengetedza zvakavanzika zvepasirese zvakanyanya. Pane rimwe divi, iyo Vault ichaita kuti iwe uchinje manas kuti ave mbavha kuba chinhu chakakosha kubva kune yakachengetedzwa kwazvo. Vazhinji usati waedza wakakundikana, asi gen'a rako rinogona kunge riri iro kuti ribudirire mune zvakavanzika uye zvine hunyanzvi. saka, imba yekutizira inojoinha zvinhu zvakasarudzika zvekuita muAmsterdam.
2. Tiza Hunt Pasi Pose
Kutiza Hunt kamuri ine matavi munzvimbo zhinji pasirese, kubva kuEngland kuenda kuSingapore. Kana iwe uchida zvisikwa zvinoshamisa, Disney nyaya, naAlice, ipapo iwe uchazoda ino yekutiza imba uye uchafamba nechinangwa chega cheKutiza Hunt, munyika dzese.
Kutiza Hunt imba ine runyorwa rwemakamuri ekupukunyuka, zvakasiyana munyika dzese. MuMarseilles, iwe unozotsvaga shamwari mushure mekunge Houdini azviita kuti zvinyangarike musikisi huru, kana kuUK batsira Alice neshamwari kuchengetedza Wonderland. saka, mapuzzle enyika nezvakavanzika zvinoda rubatsiro rwako uye nehungwaru mumaguta makuru muEurope neAsia.
3. Enigma Kutsvaga MuLondon
Inowanikwa muFinsbury, chinhambwe kubva kuLondon Bridge neThames River, Enigma Kutsvaga kutiza zvinopihwa 3 zvinoshamisa quests. Kana iwe uchifamba neshamwari, mhuri ine vana, kana vaviri vari kutsvaga zviitiko, ipapo iwe unogona kusarudza pakati pemvura yakadzika yepasi pemvura yekutiza uye iyo miriyoni-pondo heist.
Kana iwe uri adrenaline anotsvaga, pamwe anotevera Thelma naLouise? ipapo zvirahwe muEnigma Quest zvakakukwanira. MuMission Wavebreak iwe uchaponesa nyika, uye muMillion Pound Heist, iwe unozofanirwa kubatana kuti uwane mubairo mukurusa munhoroondo yazvino. saka, kana iwe uchifunga kuti une izvo zvinotora, ndokubva Enigma Kutsvaga yekutiza kamuri mumoyo weLondon yakagadzirirwa epic 60-maminetsi ekushamisira iwe.
4. Paradox Project 2: The Bookstore Kutiza Kamuri Atene
Kana iwe uri anonyanyisa mukamuri yekutiza, ipapo iyo Paradox Project 2 muAthens ndiyo yekupedzisira imba yekutiza chiitiko. Kusiyana nemamwe makamuri ekupunyuka anoshamisa munyika, iyo Paradox Project mishoni inobata yakazara neoclassical imba muAthens. Izvo ndizvo, kuda kwako kunopararira pamakamuri mazhinji uye ndima dzakavanzika mune ino imba yakatanhamara.
Uyezve, Kamuri yekutizira mabhuku 200 maminetsi mission, izvo zvinogona nyore kupatsanurwa kuva 5-6 makamuri ekupukunyuka. saka, iwe unenge uchinyatsonakidzwa nekunakisisa kwepasirese, uye icho chiitiko chakakosha mukamuri yekutiza. Yakarongedzwa zvakanaka yakaiswa nemapuzzle, nzvimbo dzakawanda, masitepisi, yakamirira vanotsvaga mafaro mukati mechitoro chechokwadi muAthens.
5. Mr.. X Chakavanzika Imba Shanghai
Kana waneta nazvo skyscrapers muShanghai, Mr.. X's puzzle imba ichave kuzorora kukuru kubva muguta rine chipatapata. Iyi inoshamisa imba yekutiza ine 5 makamuri, imwe neimwe ine chakavanzika chakasiyana chekugadzirisa. Iwe wakanyatso kuvharirwa mune imwe imba kweawa, pasina chero zano remufananidzo muhombe. Dambudziko iri kushandisa zvese zviri mumba, uye kunyange mugwagwa, kuyedza kutsvaga nzira yako yekubuda mumba.
Mr.. Makamuri ekupunyuka aX azere nezvakavanzika nematambudziko. Kupesana nemamwe makamuri ekupunyuka epasirese, pano timu yako ichada kushandisa njere dzese, kucherechedza, uye pfungwa, kungo tsvaga nzira yekubuda mumba. Mr.. X Chakavanzika Imba iri mukati memwoyo weBridge 8 II, Dunhu reHuangpu, iko kunakidzwa kwacho kunotanga kwakananga kubva pamusuwo.
6. Kutiza Mabhoti Uye SOS Kutiza Makamuri Dublin
Iyo inoshamisa nzvimbo Yekutiza Mabhoti mukamuri muDublin ndeimwe yepamusoro 10 makamuri ekupunyuka munyika. pano, iwe unozofanirwa kuisa zvese zvako kugona pamwe nesimba rako pamwechete uye uwane nzira yekubuda muchikepe. chaizvo, Kutiza Mabhoti uye makamuri eSOS ari pane barge, kubva kuDublin dock.
saka, Nzvimbo yekutiza Mabhoti uye SOS ndiwo mamwe emakamuri ekupukunyuka munyika. Nzira yekubuda izere nemapuzzle, kodhi-kubvarura, uye kugadzirisa zvakavanzika. Kana imba yekutiza iri chikamu chemhemberero chaiyo, iyo kambani inogona kuronga chikafu chemunwe kubva pedyo nembariro pane canal Doko.
7. ParaPark Kutiza Kamuri Budapest
Chakavanzika chikuru muBudapest chakakumirira iwe muParaPark yekutiza kamuri yepasi. Iwe uchaburuka kuti uwane zvinongedzo zvakarara zvakatenderedza mukamuri yekutanga-yekutiza muEurope. pano, iwe uchazviwana iwe uri munzvimbo yematsotsi, Twin Peaks akafuridzirwa. saka, gadzirira kutamba mutikitivha, uye batsira timu yako kubva mubhokisi, sekufunga kwako kunze kwebhokisi, kana pasi pevhu, nokuti nyaya kuti.
Chiitiko Chematsotsi 95 iri muNYC, uko zvikwata zvinorwa mumigwagwa, uye nhamo inoitika. saka, iwe unozodaidzwa kuti uwane kugadzirisa zvinongedzo, chengetedza mapepa acho kuti utsvage tsotsi awa risati rapera. Kupedza, iyo ParaPark yekutiza kamuri ndeye yakasimba-yemoyo inonakidza uye yekupara nyaya vanoda.
Vienna kuenda kuBudapest Nechitima
Prague kuenda kuBudapest Nechitima
Munich kuBudapest Nechitima
Graz kuenda kuBudapest Nechitima
8. Iyo Kamuri Berlin
Iyo Kamuri ine 4 mamishini, imwe neimwe 75 maminetsi kureba, yega yega inonetsa, uye imwe neimwe ichaita kuti ufambe nenguva kuenda kune imwe nzvimbo. Pfuma kuvhima muHumboldt University, iyo yekudzidzira neakanyanya chipoko muvhimi, kana kubatsira muongorori mukuru weBerlin kubata Muurayi weBerlin, zviri pachena kuti mamishini aya haasi evamutambo anotya zviri nyore.
saka, sarudza dambudziko rako zvakanyatsonaka, uye uuye wakashongedzerwa zvakanaka nenjere, chipfeko, uye wakashinga moyo. Iyo Kamuri yekutiza muBerlin ndeye 2017 Goridhe-Lock muhwina, yakagadzirirwa kupokana chero anofarira imba yekutiza. Uyezve, imba yekutiza iyi yakakodzera zvachose rwendo rweBerlin, kechipiri neechishanu.
9. Iwo Makamuri emakamuri Ekutiza Kamuri Paris
Iyi isina kujairika yekutiza imba muParis ndeye chete kune vane hushingi vanofarira. Kana usati wafungidzira kubva pazita, iyo Catacombs yekutiza kamuri inokutora iwe mazana emakore kudzoka kune nzvimbo yerima pasi pevhu repasi peParis. Ipo Paris iri imwe yeakanyanya maguta dzakanaka munyika, marinda ayo ari spooky, uye vamwe vachati zvishoma zvinotyisa.
saka, kana iwe uri munhu anotora njodzi pamoyo, uye goosebumps haisi yekumwe kunzwa, wobva wabhuka iyo Catacombs yekutiza kamuri. Kutamba mutambo wekupukunyuka pano ichave chiitiko chinonakidza uye shanduko nyowani kubva kushanyira minda, kana kutenga mukati Paris.
10. Harry Potter Kutiza Kamuri Prague
Kupukunyuka mukamuri raHarry Potter ibasa remhuri. Iyo yekushongedza uye mapuzzle ndeyevacheche-vane hushamwari, nenhamba dzekudyidzana idzo vana vanogona kutaura nadzo. Mukuwedzera, iwe nevana muchagamuchira mashiripiti wands, saka vanogona kuwana yakasarudzika nyika yaHarry Potter.
Iyo Harry Potter yekutiza imba muPrague ndeye 60 maminetsi mission. Munguva ino yemashiripiti, Chikwata chako chinofanira kutsvaga zvitatu zvakavanzika muchivande Harry Potter kamuri yekutizira, Iyo Harry Potter Kutiza Kamuri inguva inonakidza uye inonakidza yemhuri yese muPrague.
11. Kunze Kutiza Mutambo MuVilla Borghese Roma
Wese munhu anoenda kuItari kunowana chikafu, dzimba, uye zvomunharaunda waini. Nekupenga kwemakamuri ekupukunyuka achikunda nyika, Nzvimbo dzepamusoro dzeItaly dzave dzimba dzinoshamisa dzekupukunyuka. Iyo inoshamisa Villa Borghese ndiyo poindi yekutanga kune a 2.5 maawa ekugadzirisa-dambanemazwi. Imba inzvimbo yekunze yekutizira uko iwe unenge uchifambira mberi kubva kunongedzo kuenda kunongedzera nechikepe.
Iyi yakasarudzika kamuri yekutiza iri muRome. saka, paunopedza kuongorora iyo yeColosseum, iwe uchaona akanaka akavanzika mavara munzvimbo yeItaly guta. Kupedza, Villa Borghese ndiyo yakanakisa yekunze yekutiza nzvimbo muEurope. Kusiyana nedzimba dzepasi, maraibhurari, uye catacombs, pano iwe uchabatana munzvimbo yakanakisa yeItaly.
Venice kuenda kuRoma Ine Chitima
12. Iyo Laborator Yekutiza Kamuri Bunschoten
Awa kubva kuAmsterdam, iyo yeLabhoritari yekutiza imba muBunschoten yakakosha chose dhiraivha kana chitima rwendo from any location in Europe. Bunschoten ane 3 makamuri ekupunyuka, asi Laboratory ndiyo yakanakisa, uye imwe yemakamuri ekupunyuka akanakisa muEurope.
Kuti upedze basa rakaoma, you will step into Dr. Rabhoritari yaSteiner, sekusiya kwaakaita makore 7o + apfuura. Basa rako rinenge riri rekutsvaga zvakaitika kune chiremba murombo, uye iwe uchafanirwa kuunganidza simba rako rese uye nehunyanzvi kugadzirisa ichi chakavanzika mune chete 60 maminitsi. Zviri pachena, unogona kuuya 2-3 vanobatsirana nebasa, saka yeuka kubhuka pamberi.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kugadzirisa zvakavanzika zvikuru zvepasirese. Imwe yeakanakisa ekupukunyuka mukamuri mamisheni ingori rwendo rwechitima kubva pasuo rako.
Iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "12 Yakanyanya Kutiza Kamuri MuNyika" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fbest-escape-rooms-world%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura iyo / es ku / fr kana / de uye mimwe mitauro.